दूध नपकाएर खादा हुनसक्छ यस्तो खतरा ? – Halkhabar kura
२७ माघ २०७६, सोमबार ०९:४८
दूध नपकाएर खादा हुनसक्छ यस्तो खतरा ?
काठमाडौं । हामी धेरैजसो काम हतारमै गर्छौ । हतारमा गरेको कामले कतिधेरै हानि पुराउछ भन्ने कुराको अनुमान गर्दैनौ । चुरोट ,सुर्ती सेवनले मात्रै क्यान्सर हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने अब तपाईं गलत हुनुहुन्छ । दूध पिउनेमा पनि क्यान्सर हुन सक्ने खतरा देखिएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार, लुवासले केही जनावरहरूको अल्ट्रासाउन्ड गरी डाटाबेस तयार पारेको छ । जसमा भैंसी, गाईलगायतमा पनि क्यान्सर हुने देखिएको छ । वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म घोडामा पनि क्यान्सर हुने बताइसकेका छन् । रिपोर्टका अनुसार दूधदिने पशुहरूमा क्यान्सरको खतरा देखिएको हो ।
पशु विज्ञहरूका अनुसार, यी वस्तुहरूको दूध राम्रोसँग नउमाली पिएमा क्यान्सर हुने खतरा छ । तेसैले हामीले हरेक काम ध्यानपूर्वक गर्नु आवश्यक हुन्छ । हरेक कुराको राम्रो जानकारी हुदैन हामिलाइ । यसकारण पनि हामि सजक हुनुपर्छ ।
यस्तै पनीरलाई स्वादिष्ट परिकारको रुपमा चिनिन्छ । खाँदा निकै मिठो हुने पनिर दुधबाट बन्ने गर्छ । पनिर घरमा शाकाहारी पाहुना आउदा पनि पकाएर खुवाउन सजिलो हुन्छ । धेरैले रुचाउने गरेको पनिर खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुर्याउछ ।
प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन, फस्फोरस लगायतका विभिन्न पोषक तत्वहरु पाइने पनिरले धेरै रोगहरुबाट बचाउछ । १०० ग्राम पनिरमा १८ ग्राम प्रोटिन हुने हुनाले यसको सेबनले हाम्रो शरिरलाई धेरै फाइदा गर्छ ।
एक अध्ययनले पनिर खानाले क्यान्सरको खतरालाई पनि कम गर्छ । क्याल्सियम र भिटामिन डी पाइने पनिरको सेबनले ब्रेस्ट क्यान्सरबाट पनि बचाउछ । पनिरको सेबनले शरिरमा उर्जा दिन्छ ।
यसको सेबनले शरिरको पाँचन प्रणाली पनि राम्रो बनाउछ । यसको सेबन गर्भवती महिलाका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । यसले तौल घटाउन पनि सहयोग गर्छ । यसले तपाईको हड्डी र दाँतलाई मजबुत राख्ने काम गर्छ । यसमा हुने क्यालसियम र फासफोरसका कारण दाँत र हड्डी बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
यस्तै मौसम अनुसार स्वास्थ्यको लागि कुनै न कुनै फलफुल लाभदायीक हुने गर्छ । जसमध्ये बदाम पनि एक हो ।बदामलाई पौष्टिक तथा स्वास्थ्यवद्र्वक पनि मानिन्छ । हरेक मौसममा बदामको उपयोग लाभप्रद हुने गर्दछ । काँचो या पाकेको यसले मानिसलाई फाइदा पुर्याउँछ । बदाममा चिल्लो, प्रोटिन र विभिन्न प्रकारका भिटामिन तथा खनिज पाइन्छ ।
जसले गर्दा बदाम चकलेट, केक र बिस्कुट जस्तै गरि खान योग्य छ । बदाम खानाले मुटुको रक्त केसिकाहरु स्वस्थ रहन्छन । बदामबाट भरिपूर्ण भोजनले स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । बोक्राका साथमा बदाम खानु अझ राम्रो मानिन्छ । तर, यसको मात्रा भने सन्तुलित हुनुपर्दछ ।
क्षमताभन्दा धेरै मात्रामा खानाले यसले प्रायजसो अपच हुन्छ र पेटलाई खराब गर्ने पनि गर्दछ । यति मात्र हैन, बदामको सेवन कोलेस्ट्रोललाई कम गर्नमा अझ प्रभावकारी हुन्छ । भिजाएको बदामको तुलनामा अकुंरित बदाम धेरै स्वास्थ्यवद्र्वक हुने गर्दछ ।
Previous के तपाईलाई थाहा छ पनीर खानुका फाईदाबारे ? यस्ता छन् थाहा पाईराख्नुस
Next नेपाल प्रहरीको नयाँ आइजिपीबारे सरकारले निर्णय लिँदै, खनालले बुधबारदेखि अवकाश पाउँदै